Caqligeenu waa mid aan koriin samaynin! (WQ: Axmed Nuur Guruje) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Caqligeenu waa mid aan koriin samaynin! (WQ: Axmed Nuur Guruje)
Caqligeenu waa mid aan koriin samaynin ”.
Dhul-mareenkii Ingiriiska ahaa ee la odhan jirey Richard Burton , ayaa wuxuu ku sheegay buugiisa First foots in eas africa ” Arladdu waa wada bahal , waxaana ku badan dugaaga halista ah sidda ,Libaaxa , shabeelka iyo kuwo kale , nin kasta oo Soomaali ihina wuu hubaysan yahay , mar walbana waa nin feejigan oo hareeraha iska eegaya , cabsida ugu wayn ee haysaana , waa nin kale oo Soomaaliyeed oo uu iska eegayo .
”Waa aydaa is cunaysoo ,
isticmaarku lahaa ”